अहिंसा - विकिपिडिया
अहिंसाको सामान्य अर्थ हो 'हिंसा न गर्नु'। यसको व्यापक अर्थ हो - कुनै पनि प्राणीलाई तन, मन, कर्म, वचन र वाणीबाट कुनै नोकसान न पुर्याउनु। मनमा कसैको अहित नसोच्नु, कसैलाई कटुवाणी आदिका द्वार पनि नोकसान न दिनु तथा कर्मबाट पनि कुनै पनि अवस्थामा, कुनै पनि प्राणी कि हिंसा न गर्न, यो अहिंसा है| हिन्दू धर्ममा अहिंसाको धेरै महत्त्व छ। अहिंसा परमो धर्म: (अहिंसा परम(सबै भन्दा बडा) धर्म भनिएको छ। हिन्दु धर्म मा हिम्सा गर्नु लाई राक्षस दानव सरहको मानिन्छ ।
१ हिन्दू शास्त्रहरूमा अहिंसा
२ अहिंसामा जैन दृष्टि
३ अहिंसाको भूमिकाहरू
४ बौद्ध एवं ईसाई धर्म
हिन्दू शास्त्रहरूमा अहिंसासम्पादन
हिंदू शास्त्रहरूको दृष्टिबाट "अहिंसा"को अर्थ छ सर्वदा तथा सर्वदा (मनसा, वाचा र कर्मणा) सबै प्राणीहरू सहित द्रोहको अभाव। (अंहिसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानामनभिद्रोह: - व्यासभाष्य, योगसूत्र २।३०)। अहिंसाका भित्र यस प्रकार सर्वकालमा केवल कर्म या वचनबाट नैं सबै जीवहरू सहित द्रोह न गर्नको कुरा समाविष्ट हुँदैन, प्रत्युत मनका द्वारा पनि द्रोहका अभावको सम्बन्ध रह्दछ। योगशास्त्रमा निर्दिष्ट यम तथा नियम अहिंसामूलक नैं माने जान्छन्। यदि तीका द्वारा कुनै प्रकारकहरू हिंसावृत्तिको उदय हुन्छ त ती साधनाको सिद्धिमा उपादेय तथा उपकार नमाने जाते। "सत्य"को महिमा तथा श्रेष्ठता सर्वत्र प्रतिपादित गरिएको छ, तर यदि कहीं अहिंसा सहित सत्यको संघर्ष घटित हाँदछ त वहाँ सत्य वस्तुत: सत्य न भएर सत्याभास नैं मानिन्छ। कुनै वस्तु जस्तो देखियो छ तथा जस्तो अनुमित छ उनको त्यसै रूपमा वचनका द्वारा प्रकट गर्न तथा मनका द्वारा संकल्प गर्न "सत्य" कहलाउँछ, तर यो वाणी पनि सबै भूतहरूका उपकारको लागि प्रवृत्त हुन्छ, भूतहरूका उपघातको लागि छैन। यस प्रकार सत्यको पनि कसौटी अहिंसा नैं छ। यस प्रसंगमा वाचस्पति मिश्रले "सत्यतपा" नामक तपस्वीका सत्यवचनलाई पनि सत्याभास नैं मानेका छन्, किन भने उनले चोरहरूका द्वारा पूछे गए पछि ती मार्गबाट जानेवाला सार्थ (व्यापारीहरूको समूह)को सच्चा परिचय दिेको थियो। हिंदू शास्त्रहरूमा अहिंसा, सत्य, अस्तेय (न चुराना), ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह, यी ग्ग्ग्ग्ग्ग पाँचहरू यमहरूलाई जाति, देश, काल तथा समयबाट अनवच्छिन्न हुनेका कारण समभावेन सार्वभौम तथा महाव्रत भनिएको छ (योगवूत्र २।३१) र यिनीहरूमा पनि, सबैको आधारा हुन बाट, "अहिंसा" नैं सबै भन्दा अधिक महाव्रत कहलानेको योग्यता रखन्छ।
अहिंसामा जैन दृष्टिसम्पादन
जैन दृष्टिबाट सबै जीवहरूका प्रति संयमपूर्ण व्यवहार अहिंसा छ। अहिंसाको शब्दानुसारी अर्थ छ, हिंसा न गर्न। यसका पारिभाषिक अर्थ विद्यात्मक र निषेधात्मक दुइटै छन्। रागद्वेषात्मक प्रवृत्ति न गर्न, प्राणवध न गर्न या प्रवृत्ति मात्रको विरोध गर्न निषेधात्मक अहिंसा है; सत्प्रवृत्ति, स्वाध्याय, अध्यात्मसेव, उपदेश, ज्ञानचर्चा आदि आत्महितकारी व्यवहार विद्यात्मक अहिंसा छ। संयमीका द्वारा पनि अशक्य कोटिको प्राणवध हुन जान्छ, त्यो पनि निषेधात्मक अहिंसा हिंसा छैन। निषेधात्मक अहिंसामा केवल हिंसाको वर्जन हुन्छ, विद्यात्मक अहिंसामा सत्क्रियात्मक सक्रियता हुन्छ। यो स्थूल दृष्टिको निर्णय छ। गहराईमा पुगए पछि तथ्य केही र मिल्दछ। निषेधमा प्रवृत्ति र प्रवृत्तिमा निषेध छता नैं छ। निषेधात्मक अहिंसामा सत्प्रवृत्ति र सत्प्रवृत्यात्मक अहिंसामा हिंसाको निषेध हुन्छ। हिंसा न गर्नवाला यदि आँतरिक प्रवृत्तीहरूलाई शुद्ध न गरियोस् त त्यो अहिंसा न छगी। यसैले निषेधात्मक अहिंसामा सत्प्रवृत्तिको अपेक्षा रहन्छ, त्यो बाह्य छ चाहे आँतरिक, स्थूल छ चाहे सूक्ष्म। सत्प्रवृत्यात्मक अहिंसामा हिंसाको निषेध हुनु आवश्यक छ। यसका बिना कुनै प्रवृत्ति सत् या अहिंसा नहो सकती, यो निश्चय दृष्टिको कुरा छ। व्यवहारमा निषेधात्मक अहिंसालाई निष्क्रिय अहिंसा र विद्यात्मक अहिंसालाई सक्रिय अहिंसा भनिन्छ।
जैन ग्रन्थ आचारांगसूत्रमा, जसको समय संभवत: तेस्रो चौथी शताब्दी ई. पू. छ, अहिंसाको उपदेश यस प्रकार दिइएको छ : भूत, भावी र वर्तमानका अर्हत् यही भन्दछन्-कुनै पनि जीवित प्राणी लाई, कुनै पनि जन्तु लाई, कुनै पनि वस्तुलाई जसमा आत्मा छ, न मारो, न (उससे) अनुचित व्यवहार करो, न अपमानित करो, न कष्ट दुई र न सताओ।
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु र वनस्पति, यी सबै अलग जीव छन्। पृथ्वी आदि हरेक एकमा भिन्न-भिन्न व्यक्तित्वका धारक अलग-अलग जीव छन्। उपर्युक्त स्थावर जीवहरूका उपरांत न्नस (जंगम) प्राणी छन्, जसमा चलने फिरनेको सामर्थ्य हुन्छ। यो नैं जीवहरूका छ वर्ग छन्। यिनको सिवाय दुनियामा र जीव नछन्। जगत्मा कुनै जीव न्नस (जंगम) छ र कुनै जीव स्थावर। एक पर्यायमा हुनु या दोस्रोमा हुनु कर्महरूको विचित्र्दछ। आफ्नो-आफ्नो कमाई छ, जसबाट जीव अन्न या स्थावर हुन्छन्। एक नैं जीव जुन एक जन्ममा अन्न हुन्छ, दोस्रो जन्ममा स्थावर हुन सक्छ। न्नस छ या स्थावर, सबै जीवहरूलाई दु:ख अप्रिय हुन्छ। यो बुझएर मुमुक्षु सबै जीवहरूका प्रति अहिंसा भाव रखे।
सबै जीव बाँच्नु चाह्दछन्, मरन कुनै नचाहता। यसैले निर्ग्रन्थ प्राणिवधको वर्जन गर्दछन्। सबै प्राणीहरूलाई आफ्नो आयु प्रिय छ, सुख अनुकूल छ, दु:ख प्रतिकूल छ। जुन व्यक्ति हरियो वनस्पतिको छेदन गर्दछ त्यो आफ्नो आत्मालाई दण्ड दिनवाला छ। त्यो दोस्रो प्राणीहरूको हनन गरेर परमार्थत: आफ्नो आत्माको नैं हनन गर्दछ।
आत्माको अशुद्ध परिणति मात्र हिंसा है; यसको समर्थन गर्दै आचार्य अमृतचंद्रले लेखा छ : असत्य आदि सबै विकार आत्मपरिणतिलाई बिगाडनेवाला छन्, यसैले ती सबै पनि हिंसा छन्। असत्य आदि जुन दोष बतलाए गए छन् ती केवल "शिष्याबोधाय" छन्। संक्षेपमा रागद्वेषको अप्रादुर्भाव अहिंसा र उनको प्रादुर्भाव हिंसा छ। रागद्वेषरहित प्रवृत्तिबाट अशक्य कोटिको प्राणवध हुन जाए त पनि नैश्चयिक हिंसा हुँदैन, रागद्वेषरहित प्रवृत्तिबाट, प्राणवध न भए पछि पनि, त्यो हुन्छ। जुन रागद्वेषको प्रवृत्ति गर्दछ त्यो आफ्नो आत्माको नैं घात गर्दछ, फेरि चाहे दोस्रो जीवहरूको घात गरियोस् या न गरियोस्। हिंसाबाट विरत न हुनु पनि हिंसा छ र हिंसामा परिणत हुनु पनि हिंसा छ। यसैले जहाँ रागद्वेषको प्रवृत्ति छ वहाँ निरंतर प्राणवध हुन्छ।
हिंसा मात्रबाट पाप कर्मको बंधन हाँदछ। यस दृष्टिबाट हिंसाको कुनै प्रकार नहोता। तर हिंसाका कारण अनेक हुन्छन्, यसैले कारणको दृष्टिबाट उनको प्रकार पनि अनेक हुन जान्छन्। कुनै जानिजानि हिंसा गर्दछ, त कुनै अनजानमा पनि हिंसा गर हाल्दछ। कुनै प्रयोगजनवश गर्दछ, त काई बिना प्रयोजन भी।
सूत्रकृतांगमा हिंसाका पाँच समाधान बतलाए गए छन् : (१) अर्थदण्ड, (२) अनर्थदण्ड, (३) हिंसादण्ड, (४) अकस्माद्दण्ड, (५) दृष्टिविपर्यासदण्ड। अहिंसा आत्माको पूर्ण विशुद्ध दशा छ। त्यो एक पटि अखण्ड छ, तर मोहका द्वारा त्यो ढकी रहन्छ। मोहको जत नैं नाश हुन्छ त्यति नैं उनको विकास। यस मोहविलयका तारतम्यमा उनको दुई रूप निश्चित गरियो छन् : (१) अहिंसा महाव्रत, (२) अहिंसा अणुव्रत। यिनीहरूमा स्वरूपभेद छैन, मात्रा (परिमाण)को भेद छ।
मुनिको अहिंसा पूर्ण छ, यस दशामा श्रावकको अहिंसा अपूर्ण। मुनिको तरिका श्रावक सबै प्रकारकहरू हिंसाबाट मुक्त नरह सकता। मुनिको अपेक्षा श्रावकको अहिंसाको परिमाण धेरै कम छ। उदाहरणत: मुनिको अहिंसा २० बिस्वा छ त श्रावकको अहिंसा सवा बिस्वा छ। (पूर्ण अहिंसाका अंध बीस छन्, तिनीहरूमध्ये श्रावकको अहिंसाको सवा अंश छ। ) यसको कारण यो छ कि श्रावक १९ जीवहरूको हिंसालाई छोड सक्दछ, वादर स्थावर जीवहरूको हिंसालाई छैन। यसले उनको अहिंसाको परिमाण आधा रह जान्छ-दस बिस्वा रह जान्छ। यसमा पनि श्रावक उन्नीस जीवहरूको हिंसाको संकल्पपूर्वक त्याग गर्दछ, आरंभजा हिंसाको छैन। अत: उनको परिमाण उनमा पनि आधा अर्थात् पाँच बिस्वा रह जान्छ। संकल्पपूर्वक हिंसा पनि तिनै उन्नीस जीवहरूको त्यागी जान्छ जुन निरपराध छन्। सापराध न्नस जीवहरूको हिंसाबाट श्रावक मुक्त नहो सकता। यसले त्यो अहिंसा ढाई बिस्वा रह जान्छ। निरपराध उन्नीस जीवहरूको पनि निरपेक्ष हिंसालाई श्रावक त्याग्दछ। सापेक्ष हिंसा त उससे हुन जान्छ। यस प्रकार श्रावक (धर्मोपासक या व्रती गृहस्थ)को अंहिसाको परिमाण सवा बिस्वा रह जान्छ। यस प्राचीन गाथामा यसलाई संक्षेपमा यस प्रकार भनेको छ :
जीवा सुहुमाथूला, संकप्पा, आरम्भाभवे दुविहा।
सावबाटो निरवबाटोा, सविक्खा चैव निरविक्खा।।
(१) सूक्ष्म जीवहिंसा, (२) स्थूल जीवहिंसा, (३) संकल्प हिंसा, (४) आरम्भ हिंसा, (५) सापराध हिंसा, (६) निरपराध हिंसा, (७) सापेक्ष हिंसा, (८) निरपेक्ष हिंसा। हिंसाका यो आठ प्रकार छन्। श्रावक यी ग्ग्ग्ग्ग्गहरू मध्ये चार प्रकार गर्‍यो, (२, ३, ६, ८) हिंसाको त्याग गर्दछ। अत: श्रावकको अहिंसा अपूर्ण छ।
बौद्ध एवं ईसाई धर्मसम्पादन
यहि प्रकार बौद्ध र ईसाई धर्महरूमा पनि अहिंसाको ठूलो महिमा छ। वैदिक हिंसात्मक यज्ञहरूको उपनिषत्कालीन मनीषीहरूले विरोध गर जस परम्पराको आरम्भ गरेका थिए त्यसै परम्पराको पराकाष्ठा जैन र बौद्ध धर्महरूले गरयो। जैन अहिंसा सैद्धान्तिक दृष्टिबाट सारा धर्महरूको अपेक्षा असाधारण थियो। बौद्ध अहिंसा नि:संदेह आस्थामा जैन धर्मका समान महत्त्वको न थियो,मा उनको प्रभाव पनि संसारमा प्रभूत लडयो। उसीको यो परिणाम थियो कि रक्त र लूटका नाममा दौड लडनवाली मध्य एसियाको विकराल जातियाउँ प्रेम र दयाको मूर्ति बन्यो। बौद्ध धर्मका प्रभावबाट नैं ईसाई पनि अहिंसाका प्रति विशेष आकृष्ट भए; ईसाले जुन आत्मोत्सर्ग गरे त्यो प्रेम र अहिंसाको नैं उदाहरण थियो। तीहरूले आफ्नो हत्यारहरूसम्मको सद्गतिको लागि भगवान्बाट प्रार्थनाको र आफ्नो अनुयायीहरूबाट स्पष्ट भनेको छ कि यदि कुनै गालमा प्रहार गरियोस् त दोस्रोलाई पनि प्रहार स्वीकार गर्नको लागि अगाडि गर दो। यो हिंसाको प्रतिशोधको भावना नष्ट गर्नको लागि नैं थियो। तोल्स्तोइ (टल्स्टय) र गांधी ईसाका यस अहिंसात्मक आचरण भन्दा धेरै प्रभावित भए। गांधीले त जस अहिंसाको प्रचार गरे त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थियो। तीहरूले भन्यो कि उनको विरोध असत्बाट छ, कमजोरीबाट छैन। तीबाट आवृत व्यक्ति सदा प्रेमको अधिकारी छ, हिंसाको कहिल्यै छैन। आफ्नो आँदोलनका प्राय: चोटीमा छते पनि चौराचौरीका हत्याकांडबाट विरक्त भएर तीहरूले आँदोलन बन्द गर दिेको थियो।
अहिंसामा गांधीजी ले समय-समयमा आफ्नो विचार कहे या लेखहरू।
विकिमिडिया कमन्समा अहिंसा सम्बन्धी अन्य सामग्रीहरू रहेका छन्।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=अहिंसा&oldid=970154" बाट अनुप्रेषित
अन्तिम सम्पादन १९ डिसेम्बर २०२०, १८:५३
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १८:५३, १९ डिसेम्बर २०२० मा परिवर्तन गरिएको थियो।